Aung Kyaw Zeya @ အောင်ကျော်ဇေယျ
အပေါ်ယံအလှအပကိုသာ မက်မောနေကြတဲ့ လူတွေကြားမှာ စိတ်ထားအလှကို တန်ဖိုးထားတတ်ခြင်းဖြင့် ဂုဏ်ယူနိုင်​ပါစေ ...
(လူတစ်ယောက် လှတယ် မလှဘူးဆိုတာကို အပြင်ပန်းနဲ့ ဆုံးဖြတ်တာ ခဏပါပဲ...
စိတ်သဘောထား၊ နှလုံးသားလှရင် လူတိုင်းကို တစ်သက်လုံး အမှတ်ရနေစေမှာပါ)'နေကောင်းလား..'
အမျိုးသမီးတစ်ဦးက တစ်ချက်ပြုံးပြပြီး ပြောပြောဆိုဆိုနဲ့... ကျွန်မဘေးမှာ လာထိုင်တယ်။
ထိုင်ခုံနဲ့ဆန့်အောင် တဖြည်းဖြည်းထိုင်ချနေတယ်။ ခုံရဲ့နေရာအပြည့်ကို သူ့ခန္ဓာကိုယ်ကြီးက ယူလိုက်သလိုပါပဲ။ သက်တောင့်သက်သာဖြစ်သွားပြီဆိုတော့မှ သူ့ရဲ့ လက်မောင်းကြီးကို လက်တင်ခုံပေါ်တင်လိုက်တယ်။သူက ဝလွန်းနေတော့ .. ကျွန်မနေရာလေးတောင် ကျဉ်းသွားသလိုပါပဲ။
ဒါနဲ့ ကျွန်မလည်း ပြတင်းပေါက်ဘက်နားကို တိုးကပ်နေလိုက်တော့တယ်။သူက ကျွန်မဘက်ကို ကပ်လာပြီး ပျော်ပျော်ရွှင်ရွှင်၊ ဖော်ဖော်ရွေရွေ အသံကြီးနဲ့ ထပ်နှုတ်ဆက်ပြန်တယ်။
သူရဲ့မျက်နှာကြီးက ကျွန်မခေါင်းအပေါ်ကို အုပ်မိုးထားသလိုပါပဲ၊ သူက ကျွန်မကို ပြန်လှည့်ကြည့်အောင် အတင်းကြိုးစားနေတယ်။
ကျွန်မကလည်း "ဟုတ်.." လို့ တစ်ခွန်းတည်းပြန်ပြောလိုက်ပါတယ်။ သဘောမကျကြောင်း သိသာစေတဲ့ ပုံစံနဲ့ပေါ့။ကျွန်မလည်း ပြတင်းပေါက်အပြင်ကိုသာ ငေးနေလိုက်တယ်၊ ကျွန်မပုံက သုန်သုန်မှုန်မှုန်ဖြစ်နေတယ်... စဉ်းစားကြည့်ကြည့်ပါ
ဘေးက ဖက်တီးမကြီးနဲ့ ခရီးအကြာကြီးသွားရမ…
မမျှော်လင့်နဲ့ .. ဆုံးဖြတ်
ကျနော့ သူငယ်ချင်းကို လေယာဉ်ကွင်းမှာ လာကြိုနေတာပါ။
ကျနော့အတွက်ကတော့ ဘဝနဲ့ ဆိုင်တဲ့ အတွေ့အကြုံတစ်ခု ရလိုက်တဲ့နေ့လို့ ဆိုရမှာပဲ။
ကျနော်နဲ့ ၂ ပေလောက်ပဲ ကွာတဲ့နေရာက မြင်ကွင်းလေးကို မြင်ပြီးတော့ပေါ့ဗျာ။
လေယာဉ်ပေါ်က ဆင်းလာတဲ့ ခရီးသည်တွေထဲကနေ ကျနော့ သူငယ်ချင်းကို လိုက်ရှာနေတယ်၊ ကျနော်ရှိတဲ့ နေရာဘက်ကို ဦးတည်လာတဲ့ လူတစ်ယောက်ကို ကျနော် သတိထားမိတယ်။ သူက အိတ်အသေးနှစ်အိတ်ကို လက်ထဲဆွဲထားတယ်။
ကျနော့ဘေးမှာ လာကြိုတဲ့ သူ့မိသားစုကို နှုတ်ဆက်နေတယ်။
ပထမဆုံး သူ့သားအငယ်လေးကို နှုတ်ဆက်နေတယ် (သူ့သားငယ်လေးက ၆ နှစ်လောက်တော့ ရှိမယ်) သူ့လက်ထဲက အိတ်တွေကို ဘေးချရင်းပေါ့။ သူ့သားကို ပွေ့ဖက်လိုက်ပြီး ...
"ဝမ်းသာလိုက်တာ .. သားကို ဖေကြီးက သိပ်လွမ်းနေတာ .. သားရဲ့.."
သူ့သားငယ်လေးက ရှက်ပြုံးလေး ပြုံးလိုက်တယ်၊ ပြီးမှ မျက်နှာလွှဲလိုက်ရင်း ..
"သားရော လွမ်းနေတာ .." တဲ့။
အဲ့ဒီလူက မတ်တပ်ထပြီး သူ့သားကြီးကို ငေးကြည့်နေတယ်၊ (သူ့သားကြီးက ၉ နှစ် ၁၀ နှစ် အရွယ်ပါ)
သူ့သားမျက်နှာကို လက်နှစ်ဖက်နဲ့ ကိုင်လိုက်ပြီး..
"ငါ့သားတောင် အရွယ်ရောက်တော့မယ် .. ချစ်လိုက်တာ .. ငါ့သားကြီး"
ဈေးကြီးတဲ့ ညစာတွေလည်း မလိုပါဘူး၊
အဲ့ဒါတွေက ကောင်းတာမှန်ပေမဲ့ သူလိုအပ်တာက သင့်ကိုပါ။သူရင်ဖွင့်ချင်တဲ့အချိန်ကျရင် နားထောင်ပေးတတ်ရမယ် ..
သူအခက်အခဲတွေ ကြုံတဲ့အခါ မှီပြီး အနားယူဖို့ ပုခုံးတစ်စုံ အသင့်ရှိနေရမယ် ..
သူ့အိပ်မက်တွေ အကောင်အထည်ဖော်ဖို့ စိတ်ဓာတ်ကျနေရင် အားပေးစကားဆိုတတ်ရမယ်..
သူက သင့်အနားမှာရှိနေရင် လုံခြုံနေစေရမယ် .. တန်ဖိုးထားပြီး ချစ်ပါ ..
စိတ်ရှည်သည်းခံပြီး ချစ်ပါ ..
စိတ်အားထက်သန်စွာ ချစ်ပါ ..
အနည်းဆုံးမဟုတ်ဘဲ နောက်ဆုံး အချစ်နဲ့ ချစ်ပါ ..
မပြောင်းလဲဘဲ ချစ်ပါ ...သင့်အနေနဲ့ ဘယ်တုန်းကမှ အချစ်မခံရဖူးသူလို .. ပြန်ပြီး အချစ်ခံရမှာပေါ့ ...©aungkyawzeya
၁။ ပြုံးပါ၂။ ခပ်မတ်မတ် မတ်တပ်ထရပ်ပါ၊ ပုခုံးနောက်ပစ်ပါ၃။ တစ်ယောက်ယောက်ကို ချီးကျူးပါ၎။ တစ်စုံတစ်ယောက်ကို ကူညီပါ ၅။ သီချင်းနားထောင်ပါ၆။ အခန်းသန့်ရှင်းရေးလုပ်ပါ၇။ တစ်နေ့တာ အစီအစဉ်ဆွဲပါ၈။ သင့်ကိုယ်သင် မလုပ်နိုင်ဘူး၊ မလုပ်သင့်ဘူးလို့ ထင်ထားတာတွေ လုပ်ပါ၉။ ဘုရားရှိခိုးပါ (သို့) တရားထိုင်ပါ၁၀။ အသက်ကို ခပ်ပြင်းပြင်းရှူပါ©aungkyawzeya
Favorite Statuses from Facebook 1
Never beg someone to love or be with you, because when you do, you give them the power to use and walk all over you. When someone truly loves you, their actions will show and prove it to you, and you will never have to convince or beg them to love or be with you.True love is eternal, infinite, and always like itself. It is equal and pure, without violent demonstrations: it is seen with white hairs and is always young in the heart. - Honore de BalzacThere's nothing quite so humbling as thinking you're completely over someone, then realizing you're not even close.
ကိုယ်ချစ်ရတဲ့သူက Aquarius (ကုမ်ရာသီဖွား) ဖြစ်နေရင် သတိထားရမယ့် အချက် ၅ ချက်
--------------------------------၁။ သူတို့အတွေးနဲ့ သူတို့နေတယ် ကုမ်ရာသီဖွားတွေက သူတို့ ကိုယ်ပိုင်ကမ္ဘာထဲမှာပဲ နေချင်ကြတယ်၊ သူတို့အတွေးတွေနဲ့ သူတို့ ပတ်ရှုပ်နေတယ်။ တချို့အချိန်မှာ အတွေးလွန်နေတယ် .. ဒါမှမဟုတ် ကိစ္စသေးသေးလေးကို ချဲ့ကားပြီး အများကြီးတွေးတတ်ကြတယ်။ ဒါပေမဲ့ သူတို့ကို အဲ့ဒါသွားမပြောနဲ့။ သူတို့ကို ကြည့်လိုက်ရင် အားလုံးနဲ့ အဆက်ပြတ်နေပြီး အေးစက်စက်နိုင်သလိုဖြစ်ပေမဲ့ တကယ်တမ်းတော့ မဟုတ်ပါဘူး။၂။ မျက်စိစုံမှိတ်ချစ်တာမျိုးကို မကြိုက်ဘူးကုမ်ရာသီဖွားတွေက လက်တွေ့ကျကြပါတယ်။ သူတို့ရဲ့ အရည်အချင်းတွေထဲက တစ်ခုပါပဲ။ အပိုတွေ၊ အပေါ်ယံဆန်တာမျိုးကိုလည်း မလိုလားဘူး။ သူတို့က တကယ့် အချစ်စစ်မျိုးကို ခံစားချင်ကြတာပါ။ သူတို့ကို တိုးတက်စေအောင် ကူညီပေးမယ့် အဖော်မျိုးကို လိုချင်ကြတာပါ။ ကိုယ်သဘောကျနေကြောင်းကို သိသာအောင်ပြတာမျိုးကိုလည်း သူတို့က သဘောပေါက်မယ်မထင်ပါနဲ့။ ၃။ သဘောထားကွဲမယ့်ကိစ္စတွေကို ရှောင်တယ်ကုမ်ရာသီဖွားတွေက သဘောထားကွဲဖို့ အချိန်မရှိကြပါဘူး၊ အားလုံးကို မျှမျှတတနဲ့ ပြေလည်သွားစေချင်ကြတယ်။ ပြဿနာတက်ဖို့် ဖြစ်လာပြီဆိုရင် သူတို့က ရ…
အာလူး၊ ကြက်ဥ နဲ့ ကော်ဖီမှုန့်
တစ်နေ့မှာ သမီးဖြစ်သူက သူ့ဘဝဟာ စိတ်ချမ်းမြေ့စရာမကောင်းကြောင်း၊ ဘာဆက်လုပ်လို့ လုပ်ရမလဲမသိကြောင်း ဖခင်ဖြစ်သူကို မကျေမနပ်ပြောပြနေတယ်။
ဒီလိုဒုက္ခတွေ၊ စိတ်ညစ်စရာတွေကို အမြဲတမ်း ရင်ဆိုင်ဖြေရှင်းနေရတာ ပင်ပန်းနေပြီဖြစ်ကြောင်း ပြောပြတယ်။
ပြဿနာတစ်ခုကို ရှင်းပြီးတာနဲ့ နောက်တစ်ခုက ထပ်ရောက်လာသတဲ့။သူ့အဖေဟာ စာဖိုမှူးတစ်ယောက်ဖြစ်တယ်။
သူ့သမီးကို မီးဖိုချောင်ထဲ ခေါ်သွားပြီး ရေနွေး (၃) အိုးကို မီးရှိန်ပြင်းပြင်းနဲ့ တည်လိုက်တယ်။
၃ အိုးစလုံးက ရေနွေးတွေပွက်ပွက်ဆူလာတော့
တတိယအိုးထဲကို ကော်ဖီမှုန့်.. အသီးသီးထည့်လိုက်တယ်။ပြီးတော့ ရေနွေးတွေကို ဆက်ပြီး ပွက်ပွက်ဆူစေလိုက်တယ်။
သူ့သမီးကိုတော့ စကားတစ်ခွန်းမှ မပြောသေးပါဘူး။
သမီးဖြစ်သူကတော့ စိတ်မရှည်စွာစောင့်ရင်း သူ့အဖေ ဘာလုပ်နေသလဲဆိုတာကို ခန့်မှန်းကြည့်နေတယ်။မိနစ် ၂၀လောက်ကြာတော့ မီးအရှိန်ကို ရပ်လိုက်ပါတယ်။
ပထမအိုးထဲက အာလူးကို ဆယ်ပြီး ပန်းကန်လုံးထဲထည့်လိုက်တယ်။
ပြီးတော့ ကြက်ဥကိုလည်း ဆယ်တယ်၊ ပန်းကန်လုံးထဲထည့်တယ်။ပြီးတော့ ကော်ဖီကိုတော့ ယောက်ချိုနဲ့ခပ်ပြီး ကော်ဖီပန်းကန်ထဲထည့်လိုက်တယ်။
Favorite Statuses from Facebook